कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने ९ सर्त – NewsAgro.com
July 29, 2017 newsagro कृषि, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने ९ सर्त, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, हेमराज ढकाल, हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रालि
यो समाचार 1773 पटक पढिएको
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य हेमराज ढकाल हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रालि अध्यक्ष हुन् । कृषिमा समेत संलग्न ढकाल हालै महासंघअन्तर्गतकै कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापतिमा चयन भएका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि अहिले कृषि उत्पादनकै आयातमा अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाउनुपरेको बाध्यता हाम्रोसामु छ । सरकारले एकातर्फ कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नीति लिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भरता बढ्नु र व्यापारघाटा झन्–झन् चुलिने डरलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? नेपालले कृषिमा कसरी व्यावसायिकता विकास गर्न सक्छ ? महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व तहमा पुगेका ढकालले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने ९ सर्तलाई यसरी व्याख्या गर्छन :
हेमराज ढकाल, उपसभापति, कृषि उद्यम केन्द्र
हामी कृषिप्रधान मुलुकमा छौँ, तर यहाँ कृषि पेसा अँगाल्नेको संख्या बर्सेनि घटिरहेका छन् । युवाहरू बिदेसिएका छन् । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले जीविकोपार्जन गर्ने भएपछि गाउँघरमा समेत खेतीपाती हुन छाडेको छ । खेतबारी बाँझो हुने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गराउनुपर्छ । कृषिमा लाग्ने उद्यमीसमेत बढाउन आवश्यक छ । यहाँ कृषक त छन्, तर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, व्यावसायिक कृषिका लागि उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कृषिको परियोजनाअन्तर्गतका व्यवसायलाई हल्का रूपमा लिइएको छ । उद्यमीले पनि सम्पूर्ण ध्यान लगाएको देखिँदैन । त्यस्तै, व्यावसायिक कृषिका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पशुपालन, विभिन्न किसिमका खेतीलगायतमा आवश्यक परामर्श, सीप विकास र तालिम दिनुपर्छ ।
व्यावसायिक खेतीका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ । अहिले त एकै ठाउँमा कृषि, बस्ती अनि उद्योगसमेत चलेका छन् । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । अहिले व्यावसायिक खेतीका लागि ठूला जग्गा पनि पाइँदैन । सरकारले कुन–कुन ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने, कुन–कुन ठाउँमा कृषि गर्ने, कुन कृषि गर्ने भन्नेलगायतका कुराको निश्चित गर्नुपर्छ । अनि त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जलगायत ठूला सहरमा मात्रै होइन, अहिले स–साना बजार र गाउँमा समेत जग्गा पाइँदैन । जग्गाको मूल्य र भाडा महँगो छ । त्यसैले व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गा छुट्याउनुपर्छ ।
पकेट क्षेत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ
हाम्रो ७५ वटै जिल्ला वा सातवटै प्रदेशअनुसार कृषिका भिन्नभिन्नै उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले पनि घोषणा गरेर काम अघि बढी नै रहेको छ । जस्तै १ नम्बर प्रदेशलाई चिया पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, अन्य प्रदेशमा सोहीअनुसार वस्तुको घोषणा गरेर अघि बढाउनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि च्याङ्ग्रा तथा भेडापालन गर्न सकिन्छ । अहिले माछा, अदुवा, चिया, कफीलगायत उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र चर्चित छन् । ती क्षेत्रलाई सोहीअनुसार विकास गरिनुपर्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्छ । कृषि भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यसमा जुनसुकै वेला समस्या आइपर्न सक्छन् । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरीलगायत विभिन्न प्राकृतिक कारणले कृषिमा नोक्सानी पुग्न सक्छ । यस्तो वेला सरकारले कृषकलाई राहत दिन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कृषि उत्पादनको भाउ अकस्मात् घट्न सक्छ, कृषकले लगानीअनुसारको मूल्य नपाउन सक्छन्, यस्तो वेला सरकारले कृषकलाई हुने घाटापूर्ति गरिदिनुपर्छ । सरकारले सम्भावित नोक्सान र घाटाको क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
प्रविधि र पूर्वाधार विकास
हाम्रो कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रविधि र पूर्वाधारको खाँचो छ । अझै पनि सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण तथा संकलन केन्द्रलगायत पूर्वाधारको खाँचो छ । कृषिको पूर्वाधार कमजोर नै छन् । सिँचाइ नहुँदा मौसमी वर्षामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यस्तै, हाम्रो कृषिलाई आधुनिक पनि बनाउनु आवश्यक छ । अझै पनि हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा कृषि गरिरहेका छौँ । अब यसमा प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्नुपर्छ । जोत्ने, खन्ने, टिप्ने, स्प्रे गर्ने स–साना उपकरणहरूदेखि ठूला–ठूला मेसिनको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्ने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले तराईका जिल्लाहरूमा धान रोप्ने तथा चुट्ने मेसिनहरू आएका छन् । यसलाई पहाडी क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ । सरकारले औजार, उपकरण तथा मेसिनरी खरिदमा भन्सार छुटको सुविधा दिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको अहिले पनि कृषिमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नै गरेको छ । लगानी भएको पनि देखिएको छ । तर, त्यो कागजमा मात्रै भएजस्तो लाग्छ । अझै पनि फिल्डमा लगानी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसको उचित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । कृषिका नाममा अन्यन्त्र लगानी भएको पनि सुनिएका छन् । ०५७ सालमा कृषिको नीति बन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरियो, त्यो कार्यान्वयनमा पनि आयो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । बैंकहरू सबै सहरमुखी छन् । गाउँ–गाउँमा पुगेका छैनन् । स–साना कृषकले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । पहुँच पुगेको छैन । ब्याजदर पनि समस्या छ । थोरै ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था तथा घोषणा गरेका सुविधा तथा कार्यक्रम नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा कृषिले ठूलो फड्को मार्ने पक्का छ ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विभिन्न परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, त्यस्ता नीतिले निरन्तरता पाउने कामचाहिँ न्यून भएको छ । एउटा परियोजना सम्पन्न नहुँदै अर्को परियोजना सुरु हुन्छ । हाम्रोमा १०–१२ वटा परियोजना चलाउने, तर निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा लगानीको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । उत्पादन प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, बजारीकरणलगायतलाई सहयोग गर्ने गरी ल्याइएका विभिन्न परियोजनाको निरन्तर मूल्यांकन र अनुगमन पनि गरिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न खाले परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । महासंघले सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले ती परियोजना अघि बढाइरहेको छ । केन्द्रले समृद्धि परियोजना पूर्वको १६ जिल्लामा, एक गाउँ एक उत्पादन ७५ वटै जिल्लामा र एक जिल्ला एक उत्पादन १४ जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले एक जिल्ला एक उत्पादन ९ वटा जिल्लामा थपिएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादनअनुसार प्रशोधन पनि हुन्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ मजबुद बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्र छुट्याउने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, उद्यमशीलता जन्माउने, बजारीकरण गर्नेलगायत सबैजसो काममा निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।
कृषिमूलक उद्योगलाई सहुलियत
निजी क्षेत्रले अहिले कृषिमूलक साना–ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यवसायी आफैँले कृषि फार्म नचलाए पनि फार्मबाट उत्पादन संकलन गरेर त्यसको प्रशोधन गरिरहेका छन् । सरकारले कृषकका साथमा यस्ता उद्योगलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगलाई सहुलियत ऋण र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ ।
← नव नियुत्त कृषि मन्त्री यादबले निर्देशन दिदैं भने- ‘सुख्खा प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत देउ’
किसानलाई साढे चार करोड अनुदान ! →
November 29, 2013 newsagro 0
कृषि : आर्थिक समृद्धिको आधार/लेख